Home News Xog:-Farmaajo maxuu kala Hadlay Madaxda Galmudug ee uu la Kulmay!!
Xog:-Farmaajo maxuu kala Hadlay Madaxda Galmudug ee uu la Kulmay!!
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dadaalo ay ku xalineyso khilaafka u dhaxeeya hoggaanka sare ee maamulka Galmudug, kaasi oo marba marka ka dambeysa uu cirka isku sii shareerayo.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf, kuxigeenkiisa Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, iyada oo shalay gelinkii dambe ay kulan la qaateen Madaxweynaha Soomaaliya.
Warar ku dhaw dhaw kulanka ayaa waxa ay sheegayaan in Madaxweynaha uu labada garab u soo jeediyay in khilaafkooda ay xaliyaan, iyada oo uu tilmaamay in dowladda ay la garab taagan tahay wax walba oo lagu xalinayo khilaafka.
Madaxweyne Xaaf ayaa la sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu u gudbiyay in xukuumadda Soomaaliya ay tuhunsan yihiin in ay ku lug leedahay khilaafka u dhaxeeya hoggaanka sare ee Galmudug, Madaxda sare ee dowladda dhexena loo baahan yahay in ay faragelinta ka daayaan Galmudug.
Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir ayaa waxa ay beeniyeen jiritaanka in xukuumadda Soomaaliya ay faragelin ku heyso Galmudug, laakiin ay sheegeen in ay iyagu ay diidan yihiin isbedel lagu sameeyay qodobada qaar ee Dastuurka.
Dhinaca kale Madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa la sheegay in uu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho, si uu qeyb uga noqdo wada hadalka lagu heshiisiinayo Madaxda Galmudug.
Previous articlekenya”Weerarada Kooxda Al-shabaab Sahal ma looga hortagi karo”
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay Ee Siideeynta C/kariin Qalbi dhagax!!
Kheeyre oo u tegay dadkii ku waxyeeloobay Qaraxyadii shalay ka dhacay...